Nhau - yakagadzira yakajeka skrini inogona kuvhiyiwa pasina kusangana
yakagadzira yakajeka skrini inogona kuvhiyiwa pasina kusangana
yakagadzira isingabatanidzi yakajeka yekubata skrini iyo inogona kuona kune rimwe divi reiyo skrini, Ingo kwenya chigunwe chako, Hapana chikonzero chekubata sikirini kuti ishande Nekupararira kwechirwere chitsva chekorona, Inotarisirwa kuiswa mune anti -spray partitions yakaiswa pamacheki ekuverenga muzvitoro. Japan Ratidza kuronga kuronga kuvhura misika mitsva yeLCD mapaneru. 、
Isiri-yekudyidzana yakajeka iyo "air touch screen"
Iyi skrini yakajeka sehwendefa regirazi kana isina simba, Mufananidzo uchaonekwa mushure memagetsi. Mushandisi anogona kusarudza iyo icon inoratidzwa pachiratidziri, Kana kufambisa chigunwe chako kuruboshwe uye kurudyi kupurinda sikirini, Shanda senge yekubata skrini ye smartphone. Simba rayo rekushanda kuona shanduko ye "electrostatic kugona" pakati pevanhu nepaneru.Operate nemunwe wako chinhambwe chemasendimita mashanu kubva pachiratidziri, Iyo skrini ichapindura.
Chigadzirwa chekuyedza chakagadzirwa neJapan Ratidza ino nguva i12.3 inches. Iyo inofungidzirwa kushandiswa ndeye kupinza yakajeka iyo yekubata skrini mune inopesana nemadonhwe. semuenzaniso, Iyo nzira yekubhadhara nzira inoratidzwa pane anti-droplet partition yakatarwa pamari yemari yechitoro chiri nyore, Kana kuratidza kodhi yeQR yekubhadhara nhare. Zvinotarisirwa kuti nzvimbo dzakadai senzvimbo dzekurapa uye mafekitori ezvekudya izvo zvinoda manejimendi ekugadzirisa hutsanana zvichavewo nechinodiwa kune izvo zvisingaenderane zvine mutsindo zvekubata masikirini.